बग्दादमा दोस्रो हमला, ‘हाशेद’को हात ! | NepalDut
बग्दादमा दोस्रो हमला, ‘हाशेद’को हात !
इराकको बग्दादमा २४ घण्टाभित्रमा दोस्रो हमला भएको छ । दोस्रो पटक मिसाइल ग्रीन जोनमा खसालिएको बताइएको छ ।
उक्त ग्रीन जोनमा थुप्रै विदेशी दूतावासहरु रहेका छन् । रिपोर्टका अनुसार दुई ठूला विष्फोट उक्त क्षेत्रमा भएका हुन् ।
उक्त हमलापछि ग्रीन जोन क्षेत्रमा सुरक्षा अलर्ट घण्टी निरन्तर बजिरहेको थियो । उक्त हमलाको जिम्मा कसैले लिएको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरुले भने इराकमा रहेका इरान समर्थित शिया विद्रोही संगठन ‘हाशेद’ को हात रहेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।
इरान समर्थित संगठन पीएमएफका प्रवक्ताका अनुसार हमलामा पाँच सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ । यसअघि इरानले इराकस्थित अमेरिकी र गठबन्धन सैनिकहरुको सुरक्षा क्याम्पमा दर्जन बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो ।
इराकको इर्बील र अल–असद सहरमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरलाई निशाना बनाएर क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको हो ।
क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिए पनि घटनाबाट कुनै मानविय क्षति नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै बताएका थिए ।
इरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीको हत्याको बदलास्वरुप इरानले अमेरिकाका थुप्रै सैन्य शिविरलाई निशाना बनाएको हो । इरानले उक्त घटनामा ८० भन्दा बढी अमेरिकी सेना मारिएको दावी पनि गरेको थियो ।